Ciraaq: Magaalo kale oo muhiim ah oo gashay gacanta Islaamiyiinta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Takret – Mareeg.com: Dableyda dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam oo magacooda Afka Carabiga lagu soo gaabiyo “Daacish” ayaa manta la wareegay magaalada weyn ee Takret, kadib markii ay shalay la wareegeen magaalada labaad ee ugu weyn Ciraaq ee Mosul.
Wararka ka imaanaya Ciraaq ayaa sidoo kale sheegaya in dableyda Daacish iyo maleeshiyo beeleedyo la wareegeen magaalada kale ee Al-duur, kadib markii iyadoo aan dagaal weyn dhicin ay halkaas ka baxeen milateriga iyo booliska Ciraaq.
Labada magaalo ee Takret iyo Al-duur ayaa ka tirsan gobolka lagu magacaabo Salaaxudiin, halkaasoo ay ku badan yihiin dadka Sunniyiinta ah.
Dhanka kale, iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in la afduubtay shaqaalaha Qunsuliyadda Turkiga ku lahaa magaalada Mosul ayaa war kooban oo Jabhadda Daacish soo dhigtay Twitter ku beenisay in dadkaas la afduubay.
Daacish ayaa sheegtay in shaqaalaha Turkiga ah ay joogaan goob aamin ah, hase ahaatee dowladda Turkiga ayaa sheegtay iney ku jirto dedaal lagu raadinayo shaqaalaha qunsuliyadda Turkigu ku lahaa magaalada Mosul.
Warar madax banana ayaa sheegaya in dagaalyahanada Daacish qabsadeen qunsuliyadda Turkiga, lamana oga halka ay la aadeen qunsulkii iyo shaqaalihii kale ee joogay halkaas.
Magaalooyinka ay qabsatay Daacish ayaa waxaa ka barakacay kumanaan qoys, kuwaasoo ka cabsi qaba in lagu dul dagaallamo, waxaana weli goodinaya xukuumadda Raysul wasaare Nuuri Al-maaliki ee Shiicadu u badan tahay.